Yako 2015 Yemukati Yekushambadzira Strong Yakavhara Aya Maitiro | Martech Zone
Chitatu, Ndira 28, 2015 Chitatu, Ndira 28, 2015 Douglas Karr
Content Marketing iri kutungamira iyo pack pane edhijitari yekushambadzira maitiro e2015, ichiteverwa neBig Data, Email, Kushambadzira Kwekushambadzira uye Nhare. Hazvishamisi kuti kukoshesa uku kunoonekwa mune yedu agency uko kwatange tichiwedzera a Big Data purojekiti yatakagadzirira muparidzi mukuru wepamhepo. Big Data iri kuve inodikanwa nekuda kwehuwandu uye velocity yedata ratiri kuunganidza uye kuongorora kuti tifungidzire nekumhan'ara mashandiro pane zvemukati zvekushambadzira kuedza.
Mabhizinesi kubva kumisika dzese nematanho ari kuita zvirongwa zvekongiri zvekusimudzira zvirimo zvekushambadzira zvemukati, sevashambadzi veB2B vachiwedzera yavo yemari kushambadzira mabhajeti uye kugadzira zvimwe zvirimo kupfuura zvavaimboita kare. Kunyangwe makuru makuru ari kubatana mukukonana, neanosvika 69% zvakatsiga achiwedzera zvigadzirwa zvemukati uye acharamba achidaro muna 2015. Jomer Gregorio, CJG Dhijitari Kushambadzira.
CJG yakaratidza 8 Zvemukati Ekushambadzira Matanho ayo akatekeshera mune egore nzira dzekutengesa zvemukati:
Zvemukati Kushambadzira zvichave zvakanyanya yakanangwa uye yemunhu.
Zvemukati Kushambadzira zvinoshandisa zvakanyanya akabhadharwa.
Zvemukati Kushambadzira zvinoshandisa zvakanyanya marketing automation.
Zvemukati Kushambadzira zvinoshandisa zvakanyanya vanyori vane hunyanzvi.
Zvemukati Kushambadzira zvinotarisa zvakanyanya pa kugova.
Zvemukati Kushambadzira zvinoroora evanhu vezvenhau Marketing.
Zvemukati Kushambadzira zvichaita boom ne mobile marketing.
Zvemukati Kushambadzira zvichaenda supernova nekuona yekutaura nyaya.
Tags: 2015Content Marketingzvemukati zvekushambadzira maitiro
Heino tsananguro yakanaka kwazvo pamusoro pemafambiro emazuva ano ekushambadzira kwemukati.Ndinofunga iyi sere nzira dzekushambadzira dzemukati dzinobatsira kwatiri uye ikozvino-a-mazuva aya ese anonyanya kukosha kune chero kushambadzira. Uye zvakare Info-graphic inomiririra inopiwa yakanaka kwazvo.Ndinokutendai nekuda kwechinyorwa chakanaka kudaro!
Apr 13, 2015 pa 9: 21 AM
Pasina kupokana izvo zvemukati mafuta ewebhusaiti yako saka unofanirwa kuve nechokwadi chekuti shandisa mafuta emhando kuti afambe zvakanaka webhusaiti. Zvakafanana neizvi, pano iwe wakatsanangura ese maficha ekushambadzira zvemukati neazvino maitiro.